Sidee loo abuuraa mug LVM aasaasi ah qaybinta Linux kasta? | Laga soo bilaabo Linux
LVM (sidoo kale loo yaqaan 'Logic Volume Management'), waa maamule miisaan macquul ah oo u oggolaanaya isticmaaleyaasha Linux inay kordhiyaan, yareeyaan oo wax ka beddelaan qormooyinka ku saabsan darawalada adag waqtiga dhabta ah, iyada oo aan loo baahnayn in la furo nidaamka faylasha.
Si fudud loo fududeeyay, waxaan dhihi karnaa LVM waa lakab soo saarid u dhexeeya qalabka keydinta iyo nidaamka faylka.
Casharkaan waxaan ku arki doonaa sida loo sameeyo aasaaska LVM qaabeynta Linux.
Si aad u awoodo inaad abuurto mugga LVM waxay tusineysaa in la tirtiro xogta, markaa kahor intaadan bilaabin, waa inaad abuurtaa nidaam habeyn ah ama doorbideysa inaad ku sameyn karto layligan mashiinka kumbuyuutarka ah si aanad wax u yeelin xogtaada.
Tani maahan digniin fudud, maxaa yeelay dhamaan macluumaadka kujira darawal adag ayaa gebi ahaanba la tirtiri doonaa, waana sababta aad ugu baahan tahay inaad ku qabato howshan nidaamka LIVE ama darawal kale oo adag.
1 Ku rakib LVM2
1.1 Diyaarinta warbaahinta
1.2 Abuur LVM Volume Group
1.3 Isku habee MVM mugga
Ku rakib LVM2
Hadda oo xogtaadu ay gebi ahaanba badbaado tahay oo aad ka warqabto suurtagalnimada inaad lumiso xogtaada (markaa baahida loo qabo xog uruurin).
Waan sii wadi karnaa inaan ku rakibno LVM nidaamkeena, tan waxaan u furaynaa terminal dhexdeeda ayaan ku fulin doonnaa amarka soo socda sida ku xusan qeybinta aan isticmaaleyno.
On Debian, Ubuntu iyo deriska:
On Arch Linux, Manjaro, Antergos iyo deriska:
Wixii Fedora iyo noocyadeeda
Ku jira OpenSUSE
sudo zypper instalar lvm2
Hadda isagoo lvm ku jira nidaamkayaga, waxaan sii wadaynaa inaan helno xidid helitaanka:
Marka tan la dhammeeyo, waa inaan abuurno mugga aan ku isticmaali doonno LVM nidaamkeenna, tan waxaan u isticmaali doonnaa aaladda cfdisk:
Halkan waxaan ka saareynaa dhammaan qormooyinka diskiga (taasi waa sababta bakcup looga digay).
Markii dhammaan qoruhu ka dhammaadeen, hadda waxaan dooran doonnaa ikhtiyaarka ah "cusub" si aan ugu abuurnno qayb cusub diskka, isticmaal dhammaan diskiga adag.
Hadda waxaan dooran doonaa "aasaasiga ah" ka dibna kaliya ku dhufan galaan. Kadib dooro ikhtiyaarka «Nooca» halkanna waa inaad heshaa oo aad doorataa ikhtiyaarka "Linux LVM"
Markay hawshan dhammeeyaan, waa inay gujiyaan "qor" ugu dambaynna guji meesha laga baxo. Kahor intaanan abuurin MVM-ga mugga macquulka ah oo aan qaabeyn karno, waa inaan abuurnaa mugga jirka LVM
Abuuritaanka LVM mugga Linux waxaa lagu sameeyaa aaladda pvcreate. Terminal-ka, waxaan ku fulin doonnaa amarka pvcreate wadajirka iyo qaybinta aan dhowaan abuurnay, waa inay u muuqataa wax sidan oo kale ah:
Hadda waxaan ku xaqiijin karnaa abuurista mugga LVM amarka:
Abuur LVM Volume Group
Hadda oo aan haysanno qaabeynta mugga jirka ee LVM, tallaabada xigta waa in la abuuro koox mugga LVM ah.
Si aad u awoodo inaad abuurto mid cusub, kaliya socodsiiso amarka vgcreate oo ay weheliso wadada kala qaybinta, kiiskan waxaan ugu magac daraynaa "mug-lvm" laakiin waxaad tan ku badali kartaa amarka:
Isku habee MVM mugga
Qiyaasta macquulka ah ayaa ah halka dhammaan xogta lagu kaydiyo LVM. Si loo abuuro mug cusub oo macquul ah LVM, waxaan isticmaalnaa amarka soo socda, tusaale ahaan, si loo abuuro mug macquul ah 80 GB, waxay noqon laheyd sidan soo socota:
Qaab dhismeedka aasaasiga ah ee loogu talagalay abuurista mugga macquulka ah waa:
Ugu dambeyntii waa inaan sii wadnaa siinta qaab cabirka macquulka ah ee la abuuray, tan waa inaan isku dhignaa wadada soo socota:
Oo halkan waxaan ku fulin karnaa ls, si aan u hubino in muggeena halkan yaal:
Marka la xaqiijiyo, waxaan sii wadeynaa inaan qaabeyno mugga:
Marka tan la dhammeeyo, waxaan ka bixi karnaa asalka adoo garaacaya bixitaanka, oo hadda waxaan si fudud u sii wadi doonnaa inaan kor u qaadno mugga amarrada soo socda:
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » GNU / Linux » Sidee loo abuuraa mug LVM aasaasi ah qaybinta Linux kasta?
Haddii aad ku rakibayso nidaamka hawlgalka LVM, PV waa inuu had iyo jeer noqdaa qayb, laakiin haddii aad u isticmaali doontid disk oo dhan xogta oo keliya, waxaa ugu wanaagsan in PV lagu sameeyo diskiga oo dhan, sidan haddii waxaad kordhineysaa cabirka diskiga (hadii uu tusaale ahaan yahay mashiin dalwad ah) waxaad kordhin kartaa PV, VG iyo LV hot.